HORDHAC : Velencia VS Arsenal? Malaga yabaa in Arsenal ay la kulanto waji gabixii soo gaaray Kooxaha Barcelona iyo Ajax? – Gool FM
( Europe ) 9 Maajo 2019 Kooxda Arsenal oo 3-1 kaga soo fara xalatay dhigeeda Kooxda Valencia kulankii lugta hore oo ka qabsoomay garoonkooda Emirates ayaa markan kula balansan Velencia oo joogto gurigeeda kulanka lugta labaad ee wareega afar dhamaadka tartanka Europa League.
Xidiga reer Farance ee Francis Coquelin ayaa ganaax ku seegay kulankii lugta hore , lakiin waxa uu xor u yahay inuu ka horyimaado kulankan kooxdiisii hore ee Gunners .
Geoffrey Kondogbia iyo Denis Cheryshev ayaa ah ciyaartoyda kaliya ee ka maqan safka kooxda Valenci ee caawa.
Dhinaca kale Kooxda Arsenal oo marti ah ayaa kulankan weyn doonta xidigihii mudooyinkan sida joogtada ugu maqnaa ee Rob Holding, Hector Bellerin, Danny Welbeck iyo Aaron Ramsey oo macasalaameeyey kooxda iyo dhamaan taageerayaasha kaddib markii la xaqiijiyey in uusan lug dambe garoonka soo dhigi doonin .
Ainsley Maitland-Niles ayaa seegay kukankii bar-baraha 1-1 ay la dhaafi waayeen Brighton, lkn daafacan dambeedka midig ayaa dib ugu soo laabanaya safka koowaad ee kooxdiisa.
Kabtan Laurent Koscielny ayaa dib ugu soo laaban doono safka Kooxda kaddi markii uu seegay kulankii Axada madaama uu macalinku go’aansaday in uu halis gilin xaalada caafimaad ee xidigiisa.
Kulanka : Velencia VS Arsenal (Europa League)
Goobta : Estadio Mestalla
Marnaba ma dhicin koox loogu soo adkaaday labo gool iyo wax ka badan kulanka lugta hore ee wareega Afar dhamaadka tartanka Uefa Cup oo hada loo yaqaano Europa League in ay u soo baxaan finalka tartanka tan iyo Naadiga Espanyol oo sidan sameesay sanadkii 1988 ciyaar ay la qaateen Kooxda Brugge.
Guud ahaan , shan koox oo ka mid ah 28-kii kooxood ee loogu soo badiyey labo gool iyo wax ka badan kulanka lugta hore ee wareega afar dhamaadka tartanka Europa League ayaa ugu dambeen u soo baxayey kaba dambeesta tartanka.
Iyada oo lagu darayo kulamadii finalka , Arsenal macakinkooda Unai Emery ayaa badiyay 18 kii kulan ee wareega kala baxa tartanka Europa League, markii ugu dambeysey ee tartankan laga cirib tiro waxaa ka saartay Kooxda Valencia heerkiisa afar dhamaadka xili ciyaareedkii 2011-12 .
Arsenal marnaba maqasaarin kulan ka tirsan tartamada yurub iyada oo markaas kulanka lugta hore ku soo adkaatay labo gool iyo wax ka badan.
Valencia ayaa raadineysa finalkeedii ugu horeeyey ee Yurub tan iyo markii ay 2-0 ku garaaceen Kooxda Marseille sannadkii 2004 waxaana xilligaas macalin u ahaa Rafael Benitez
Kooxda Valencia ayaa badisay 3dii kulan ee ugu dambeyey oo ay garoonkeeda kula ciyaartay Arsenal tartamada oo dhan.
SAWIRRO: Tababaraha Tottenham Pochettino oo Ooyin jabsaday kaddib Mucjisadii ay xalay kooxdiisa ku soo baxday